Ny pejy fandokoana tetezana misintona sy miloko maimaim-poana
Ny tetezana dia iray amin'ireo tranobe malaza amin'ny ankizy amin'ny fandokoana. Satria ny tetezana iray dia mampifandray ireo dia ataon'ny fiara amin'ny fialan-tsasatra na fitsidihana havana.
Boky fandokoana tetezana
Na izany aza, zava-dehibe hatrany ny fanaovana ireo pejy fandokoana amin'ny fomba ankafizin'ny ankizy. Miorina amin'ny fomba tsotra sy mazava. Io ihany no fomba ahafahan'ny ankizy mankafy fandokoana. Ny fikitihana ny sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny maodely voafantina:
Renirano tetezana vato
Tetezana lohasaha any an-tendrombohitra
Loko amin'ny tetezana